Yiddish -lug- Yiddish (יידיש, יידיש, אידיש, yidish / אידיש, yidish / idish, lit. "Yuhuud", ayaa lagu qeexay [jɪdɪʃ] [ɪdɪʃ]; ilaha qaangaarka ah Younish-Taitsh, luuqada Judaeo-Jarmal) Yuhuudda Ashkenazi. Wuxuu asal ahaan ka soo jeeday qarnigii 9aad ee Bartamaha Yurub, isaga oo siinaya jaaliyadda Ashkenazi oo leh jiheeye sare oo jarmal ku salaysan oo la xidhiidha walxaha laga soo qaado Cibraaniga iyo Aramaic iyo sidoo kale luqadaha Slavic iyo raadinta luuqadaha Luqadda. Yidishku wuxuu ku qoran yahay nuqul dhammaystiran oo ah ereyada Cibraaniga ah.
Luqaddaas magaca Ilaahay waxaa lagu qoray afar shibbane יהוה. Afartaas xaraf oo Yiddish ah waa YHWH oo loo yaqaanno Tetragrammaton. Laakiin magaca Ilaahay luqad kasta dhawaaq gooni ah buu leeyahay. Af Soomaaliga dhawaaqaas waa “Yehowah.”
Tixraacii ugu horreeyay ee ka badbaaday waxa uu ka soo jeedaa qarnigii 12aad, waxaanad wacdaa luqadda af-ruushka (luuqadda Ashkenaz) ama iswidhajh (taytsh), oo ah nooc ka mid ah tija, magaca casriga ah ee Jarmalka Jarmalka. Luqad ahaan, luuqad waxaa mararka qaarkood loogu yeedhaa "macmacaanka" (mame-dahn, luuqada "afka hooyo"), taas oo kala soocaysa af-lardin (kuhadhesh) (luuqad carabi ah), oo macneheedu yahay Cibraaniga iyo Aramaatiga. Ereyga "Yiddish", gaaban Yidish Taitsh "Jarmal Jarmal", ma noqonin tan ugu badan ee loo adeegsado suugaanta ilaa qarnigii 18aad. Dhammaadkii 19aad iyo qarnigii 20aad luqadda ayaa loo yaqaan 'Yuhuud', ​​gaar ahaan kuwa aan Yuhuudda ahayn, [caddaynta loo baahan yahay] laakiin 'Yiddish' ayaa mar kale ah calaamad aad u ballaadhan maanta.
↑ Ilaahay Magac Muu Leeyahay?
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Yiddish_language&oldid=220244"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 18 Oktoobar 2021, marka ee eheed 09:57.